‘दुई वर्षमा नेपाल समाजवादी कोर्षमा प्रवेश गर्नेछ’ — News of The World
संसार न्यूज संवाददाताभाद्र २०, २०७५
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार छ । अझ सहयोगी दलको साथले यो सरकारसँग दुई तिहाइ मत छ । यस्तो ऐतिहासिक सरकारसँग जनताका व्यापक अपेक्षा छन् । लामो समय पछि देशमा बहुमतको सकार बनेको छ । यो सरकारले आफ्नो पहिलो अर्धबार्षिक काल समेत बिताइसकेको छ । सरकारको ६ महिने कार्यकाल, यसको गति र जनताको सम्मति, विमतिका विषयमा नेकपा राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईसँग संसारन्युजका लागि पुष्पलाल पाण्डेले गरेको छोटो कुराकानी :
यो सरकारको ६ महिने कार्यकाल र पार्टीको चुनावमा जाँदै गर्दाको घोषणापत्रमा तालमेल नभएको, सरकार ससक्त बन्न नसकेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?
हामीले निर्वाचनमा भागलिदै गर्दा जनताको बिचमा जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थियौं, समृद नेपाल सुखी नेपालीको ु सरकार बनाउदै गर्दा र यो ६ महिना व्यतित गर्दा हामीले हाम्रो घोषणापत्र र हाम्रा प्रतिबद्धतालाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरेका छौं । आदरणीय केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिरहदा र त्यसपछिको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन आएको छ ।
यस विचमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति देखाएको छ । क्षेत्रियस्तरको सीखर सम्मेलन भर्खरमात्र सम्पन्न गरेको छ । दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीलाई हाम्रो समृद्धिसँग जोड्न सफल भएको छ । हामी सत्तासीन बनिरहँदा देशको ढुकुटी रित्तो थियो । अघिल्लो सरकारले जानाजान हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नेगरी ढुकुटी रित्याएर छाडेको थियो । हाम्रो पहिलो काम त्यो ढुकुटीको व्यवस्थापन र जनचाहनाको सम्बोधन थियो । यो काममा हामी सफल भएका छौं ।
तर,यो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले त जनतामा र स्वयम् पार्टीमा समेत निराशा ल्याएको छ नि त ?
सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कमरेड केपी ओली नेतृत्वको सरकार छोटो आयुको सरकार होइन । यो सरकार पूरा ५ वर्ष चल्छ र अर्को निर्वाचनपछिको पनि लोकप्रिय मत सहितको सरकार नेकपाकै बन्छ । यसकारण यो सरकारले रित्तो ढुकुटीबाट जनताका असिमित चाहाना पूरा गर्ने अत्यन्तै कठिन बाटो हिड्ने निश्चय गरेको छ ।
यो बजेटमा हामिले विगतमा जस्तो विना पैसा योजना बनाउने र पुँजी विनियोज गर्ने काम गरेनौं । यो सरकारले पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरीकरण, सिगात्से काठमाडौं रेलमार्ग, दक्षिण रेल मार्गका प्रसस्त ठूला योजनालाई बजेट विनियोजन गरेका छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, विभिन्न हुलाकी मार्ग निर्माणमा ध्यान दिएका छौं । मलाई लाग्छ हाम्रा यी ठूला परियोजनाले जनतालाई दिर्घकालिन राहत दिनेछ ।
तर, घोषणापत्रमा जेष्ठ नागरिक लगायतका अन्य सामाजिक कल्याणका घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन त गर्न सकेको देखिएन नि ?
हो, तपाइले भनेको साँचो हो । तर, यसमा हामी मिहिन तरिकाले लागेका छौं । यो बजेटमा हामिले जेष्ठ नागरिकको बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेका छौं । जेष्ठ नागरिक भत्ता भन्दा त्यो धेरै गुणा लाभदायी थियो । तर, यसको जनपक्षीय प्रचार हुन सकेन ।
हामीले आउदो बजेटसम्म देशको ढुकुटीलाई समृद्ध बनाएर यस्ता सामाजिक कल्याणका कामलाई तिब्र बनाउँदै लग्ने छौं । अहिले त रित्तो ढुकुटीले हाम्रो हात बाधिदिएको अवस्था रहेकोले यो काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।
के यहि गतिले तपाइहरुले भनेजस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र संघीयताले परिकल्पना गरेजस्तो समाजवादको गन्तव्य भेटिएला त ?
पक्कै ! हामीले लिएको गति बाहिर देखिएजस्तो धीमा होइन । घर बनाउँदा जगमा जति, समय माथि पुग्दा लाग्दैन् । हामी समाजवादी नेपालको ‘जग’ बनाउने काममा लागेका छौं । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम हो । जग जति बलियो हुन्छ, घर त्यति नै टिकाउ हुन्छ । अहिले हामीले सडक, जलविद्युत्, रेलमार्ग, जलमार्ग, बिमानस्थल निर्माणमा विशेष ध्यान दिएका छौ । यि विकास र समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार हुन् । यस्ता संरचनाले नै देशमा समृद्धि ल्याउने हुन । अब हाम्रो ध्यान त्यस्ता संरचनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी र सुविधाको समन्यायीक वितरणमा जानुपर्दछ । समन्यायीक वितरणले समाजवादको बाटो तय गर्दछ ।
यो देशमा अब समाजवादको सपना देख्ने बेला आएको हो त ?
अब सपना होइन, समाजवाद विपनामै हाम्रो घरदैलोमा आउने क्रममा छ । मलाई लाग्छ, आउने २ वर्षमा देशका धेरै क्षेत्रमा कायापलट हुनेछ । समृद्धिले फड्को मारी सक्ने छ र समाजवाद टुप्लुक्क हामीसँग यात्रा गर्न आइपुग्ने छ ।
समाजवाद टुपुल्क जनताको घरदैलोमा आइपुग्ने आधार के हुन् ?
अबस्य हामीले पाएको रित्तो ढुकुटी भरिने क्रममा छ । विग्रीएका अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारतर्फ अगाडि बढेका छन् । निकटका दुई छिमेकी देशहरु हाम्रो समृद्धिको यात्राका सहयात्री बनेका छन् । विश्व बैंक, मुद्रा कोष हामीसँग काँधमा काध जोडेर हिड्न तयार छन् । स्वदेशभित्र उत्साहजनक तरिकाले निर्माणका काम भएको छ । अनेकखाले एकाधिकार तोडिदै छन् । जनतामा व्यापक उत्साह सिर्जना भएको छ । तपाई ढुक्क हुनुहोस् २ वर्षमा नेपाल समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।